विप्लव समूहका कार्यकर्ता बन्दुक बोकेर गाउँगाउँ हिँड्न थालेका हुन् ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर समाचार राष्ट्रिय समाचार विप्लव समूहका कार्यकर्ता बन्दुक बोकेर गाउँगाउँ हिँड्न थालेका हुन् ?
विप्लव समूहका कार्यकर्ता बन्दुक बोकेर गाउँगाउँ हिँड्न थालेका हुन् ?
७ असार २०७६, शनिबार ०८:२३
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल मुठभेडमा मारिएको प्रहरीको दाबी छ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्ती खोलामा बिहीबार दिउँसो मुठभेड भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
बाटोमा प्रहरीसँग जम्काभेट भएपछि विप्लव समूहका चार कार्यकर्तासँग मुठभेड भएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार घटनास्थलबाट पेस्तोल बरामद भएको छ । प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय र जिल्लाबाट खटिएको टोलीसँग मुठभेड भएको पनि उनले बताए ।
प्रहरीको दाबीले प्रश्न उठ्छ– के विप्लव समूह साँच्चै द्वन्द्वमा गएको हो ? उनीहरू हतियार बोकेर खोलानाला र गाउँ–पखेरा हिँड्न थालेका हुन् ? स्थिति साँच्चै त्यस्तै हो भने एक–एकजनालाई गोली हानेर यो समस्याको समाधान हुन सक्छ ? मुठभेडले नै समस्या समाधान गर्ने हो भने राज्यसँग के–कस्तो रणनीति छ ? तर, प्रहरीका यस्ता कारबाहीले समस्या समाधान गर्नेभन्दा द्वन्द्व उक्साउने जोखिम छ । नयाँ पत्रिकामा याे खरब छ ।
गाँजा भाङ खाएर शिवको दर्शन मिल्दैन
शिवरात्रि भाङ खाने पर्व मात्रै होईन, के छ यसको महत्व ?
आज महाशिवरात्रि : देशभरका शिव मन्दिरहरूमा शिवको पूजा आराधना गरी मनाइँदै